Slurry Pumps များ
အလျားလိုက် slurry ပန့်များ
ဒေါင်လိုက် sump slurry ပန့်များ
Submersible Slurry Pumps များ
ဟိုက်ဒရောလစ် ရေငုပ်သင်္ဘော slurry ပန့်
အလျားလိုက် အမြှုပ်ထသည့် ပန့်များ
Vertical Froth Pumps များ၊
SiC Ceramic Slurry Pump အစိတ်အပိုင်းများ
Double Suction ရေစုပ်စက်
YZQ စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် ရေငုပ်သင်္ဘော slurry ပန့်
Horizontal Froth Pump အစိတ်အပိုင်းများ
အလျားလိုက် Froth Pump
ZH High Chrome Alloy Slurry Pump
D, DM, DF, DY စီးရီး multistage centrifugal ပန့်
TZX စီးရီး High Head Slurry Pump
UHB-ZK Corrosion Resistant Mortar Mud Pump အမျိုးအစား
TZM Z Series Slurry Pump
အလျားလိုက် Filter ဖိပြီး Feed Pump
Polyurethane PU Slurry Pump အစိတ်အပိုင်းများ
ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရော်ဘာ slurry ပန့်
ZA စီးရီး Compact Slurry Pump
QJ Stainless steel well submersible pump (deep well pump)၊ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
QJ-type submersible pump သည် မော်တာ နှင့် ရေစုပ်စက် များ သည် ရေ ရုတ်သိမ်း သည့် စက် များ ၏ လုပ်ငန်း တွင် ရေ သို့ တိုက်ရိုက် ရေ တွင်း မှ ထုတ်ယူ ရန် သင့်တော် သည် ၊ ၎င်း သည် မြစ် ၊ ရေလှောင်ကန် ၊ ရေမြောင်း များနှင့် အခြား ရေ ကယ်တင်ရေး ပရောဂျက် များအတွက်လည်း အသုံးပြု နိုင် သည် ။ အဓိကအားဖြင့် လယ်ယာမြေ ဆည်မြောင်းနှင့် ကုန်းပြင်မြင့်တောင်တန်းများ သည် လူနှင့်တိရစ္ဆာန် ရေအတွက်သာမက မြို့များ၊ စက်ရုံများ၊ ရထားလမ်းများ၊ မိုင်းများ၊
QJ Stainless steel well submersible pump (deep well pump) ပါရှိပါတယ်။
1. မော်တာ၊ ရေစုပ်စက်တစ်ခု၊ ရေထဲသို့ ခိုးဝင်၊ လုံခြုံစိတ်ချစွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်။
2. ရေတွင်းပိုက်နှင့် ရေပိုက်များအတွက် အထူးလိုအပ်ချက်မရှိပါ (ဆိုလိုသည်မှာ စတီးပိုက်တွင်း၊ ပြာပိုက်တွင်း၊ မြေဆီလွှာ အစရှိသည်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖိအားခွင့်ပြုချက်အောက်တွင်၊ သံမဏိပိုက်၊ ရေပိုက်၊ ပလပ်စတစ်ပိုက်စသည်ဖြင့် ရေပိုက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။)
3. တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လွယ်ကူရိုးရှင်းသော၊ သေးငယ်သောခြေရာ၊ ပန့်ခန်းတည်ဆောက်ရန် မလိုအပ်ပါ။
4. ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကုန်ကြမ်းချွေတာခြင်း။
ရေငုပ်သင်္ဘောပန့်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများသည် သင့်လျော်မှန်ကန်သော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှု၏ အသက်တာဖြစ်သည်။
QJ Stainless steel well submersible pump (deep well pump) cအသုံးပြုမှုအခြေအနေများ
QJ အမျိုးအစား အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများအောက်တွင် ရေငုပ်သင်္ဘောစုပ်စက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်သည်-
1. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ 50HZ နှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား 380 ± 5% V ဖြင့် အဆင့်သုံးဆင့် AC ပါဝါထောက်ပံ့မှု။
2. ပန့်ဝင်ပေါက်သည် ရွေ့လျားနေသောရေအဆင့်အောက် 1 မီတာအောက်တွင်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ရေငုပ်အတိမ်အနက်သည် hydrostatic အဆင့်အောက် 70 မီတာထက်မကျော်လွန်သင့်ပါ။ မော်တာ၏အောက်ပိုင်းသည် အောက်ခြေရေစူးအထက် အနည်းဆုံး 1 မီတာဖြစ်သည်။
3. ရေအပူချိန်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 20 ℃ထက်မမြင့်ပါ။
4. ရေအရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ- (1) ရေပါဝင်မှု 0.01% (အလေးချိန်အချိုးအစား) ထက်မပိုပါ။
(2) PH တန်ဖိုး 6.5 ~ 8.5 အကွာအဝေး;
(၃) ကလိုရိုက်ပါဝင်မှု 400 mg/l ထက်မပိုပါ။
5. အပြုသဘောဆောင်သောတန်ဖိုးလိုအပ်သည်၊ နံရံသည်ချောမွေ့သည်၊ ကောင်းမွန်စွာတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိပါ။
QJ Stainless steel well submersible pump (deep well pump) တည်ဆောက်ပုံ ဖော်ပြချက်
1.QJ-type submersible pump unit တွင်- ရေစုပ်စက်၊ ရေငုပ်သွင်းနိုင်သော မော်တာ (ကေဘယ်လ်အပါအဝင်)၊ ရေပိုက်များနှင့် ထိန်းချုပ်ခလုတ် လေးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
single-suction multi-stage vertical centrifugal pump အတွက် submersible pump: ပိတ်ထားသော ရေပြည့်စိုစွတ်သော၊ ဒေါင်လိုက်သုံးဆင့် လှောင်အိမ်အတွက် ရေငုပ်သွင်းနိုင်သော မော်တာ၊ မော်တာနှင့် စုပ်တံ သို့မဟုတ် single drum coupling တိုက်ရိုက်၊ Core cable သုံးခု၏ မတူညီသော သတ်မှတ်ချက်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်အဆင့်များအတွက်လေကြောင်းခလုတ်နှင့် self-decompression starter၊ အနားကွပ်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိပိုက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအချင်းအတွက်ရေပိုက်၊ ဂိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူမြင့်မားသောဓာတ်လှေကားပန့်။
2. Submersible pump ကို baffle ၏ အဆင့်တိုင်းတွင် ရော်ဘာ bearing ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပန်ကာကို သွယ်သောလက်စွပ်ဖြင့် စုပ်တံတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ baffle သည် threaded သို့မဟုတ် bolted ဖြစ်သည်။
3. ယူနစ်ပျက်စီးမှုကြောင့် ဖြစ်ရသည့် အချိန်ကို ရှောင်ရှားရန် အပေါ်ပိုင်းတွင် စစ်ဆေးသော အဆို့ရှင်ပါသော မြင့်တင်ရေငုပ်သင်္ဘောစုပ်ပန့်။
4. မော်တာထဲသို့သဲများ သဲများစီးဆင်းမှုကို တားဆီးရန် မော်တာထဲသို့ သဲများစီးဆင်းမှုကို တားဆီးရန် 4. ဝင်္ကပါသဲခုံနှင့် အရိုးစုဆီတံ ဆိပ်၏ နောက်ပြန်စုဝေးမှုနှစ်ခုပါရှိသော ရေငုပ်သင်္ဘောမော်တာ ရိုးတံ။
5. ရေချောပေးထားသော ဝက်ဝံများပါသော ရေအောက်ပိုင်းမော်တာ၊ ရော်ဘာဖိအားထိန်းညှိရုပ်ရှင်၏အောက်ပိုင်း၊ ဖိအားထိန်းညှိသောစပရိန်၊ ရေလှိုင်းခန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိအားကို ချိန်ညှိပါ။ polyethylene လျှပ်ကာဖြင့်မော်တာအကွေ့အကောက်များ၊ နိုင်လွန်ဂျာကင်အင်္ကျီတာရှည်ခံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရေ၊ QJ-type cable connector နည်းပညာဖြင့်ကေဘယ်လ်ချိတ်ဆက်မှု၊ ခြစ်ရာသုတ်ထားသောအလွှာမှချိတ်ဆက်ကိရိယာ insulation ကို၊ အလွှာတစ်ခုပတ်ပတ်လည်တွင်စိုစွတ်သောရော်ဘာဖြင့်သေချာစွာဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ထို့နောက် ရေစိုခံကော်တိပ်အလွှာ ၂ မှ ၃ လွှာဖြင့် ထုပ်ပိုးထားပြီး ရေစိုခံတိပ်အလွှာ (သို့) ကော်ပတ်ပေါ်တွင် အထုပ်အပြင်ဘက်တွင် ရော်ဘာတိပ်အလွှာ (စက်ဘီးခါးပတ်) အလွှာဖြင့် ပတ်ထားသည်။
6. မော်တာအား အလုံပိတ်ထားပြီး တိကျစွာရပ်တန့်ထားသော bolt နှင့် cable outlet ဖြင့် အလုံပိတ်ထားသည်။
7. မော်တာ၏အပေါ်ဘက်စွန်းတွင် ရေဆေးထိုးအပေါက်ပါရှိပြီး လေဝင်ပေါက်တစ်ခု၊ ရေအပေါက်၏အောက်ပိုင်းရှိသည်။
8. အပေါ်နှင့်အောက် တွန်းအား bearing ပါရှိသော မော်တာ၏အောက်ပိုင်းကို အအေးခံရန်အတွက် groove ပေါ်တွင် thrust bearing နှင့် axial force up and down တို့ကို pump up and down ဖြင့် ကြိတ်ထားသည်။
QJ Stainless steel well submersible pump (deep well pump)၊ အလုပ်သဘော
ပန့်မဖွင့်မီ စုပ်ပိုက်နှင့် ပန့်ကို အရည်ဖြည့်ရပါမည်။ ပန့်ကို စုပ်ပြီးသောအခါ၊ impeller သည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် လှည့်ကာ အရည်သည် ဓါးဖြင့် လှည့်သည်။ centrifugal force ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ ၎င်းသည် impeller ကို အပြင်သို့ ထွက်သွားပြီး အရည်သည် တဖြည်းဖြည်း နှေးကွေးလာပြီး pump Export, discharge pipe outflow မှ ဖိအားများ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာပါသည်။ ဤအချိန်တွင် အရည်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ ဓါး၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ပတ်ပတ်လည်သို့ ပစ်ချပြီး လေမရှိသော ဖိအားနည်းသော နေရာတွင် အရည်မရှိသော လေဟာနယ်၊ လေထုဖိအား၏ ရေကန်အတွင်းရှိ အရည်ကန်သည် စုပ်ယူမှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ ပန့်ထဲသို့ ပိုက်သည် အရည်များ အဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေပြီး အရည်များကို ပိုက်မှ အဆက်မပြတ် စုပ်ယူနေပါသည်။
QJ Stainless steel well submersible pump (deep well pump) ရတယ်လေ။se နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ
QJ-type submersible pump သည် လယ်ယာမြေ ဆည်မြောင်း၊ ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေနုတ်မြောင်းအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်းပြင်မြင့်၊ တောင်ပေါ်လူများ၊ မွေးမြူရေးရေအတွက် အသုံးများသော စွမ်းအင်ချွေတာရေး ထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံတော် စံနှုန်းများပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။
ပန့်သည် ရေအောက်အလုပ်လုပ်ရန် ရေအောက်တစ်ခုထဲသို့ QJ submersible pump နှင့် YQS submersible motor တို့ပါဝင်သည်။ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ တပ်ဆင်မှု၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူမှု၊ ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုစသည်ဖြင့်။
QJR series of heat-resistant submersible pump ပါရှိသော ရေတွင်းများသည် အပူဒဏ်ခံနိုင်သော ရေငုပ်သုံးအဆင့် အပျက်အစီး မော်တာဖြင့် ကောင်းစွာ ကောင်းစွာ တပ်ဆင်ထားပြီး အပူဒဏ်ခံနိုင်သော ရေငုပ်စုပ်ပန့်အဖြစ် တပ်ဆင်ကာ ရေပူအပူချိန် 100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ရေတွင်းထဲသို့ မြုပ်သွားသည် ။ , ရေသည်ထိရောက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်; ဘူမိအပူဓာတ်သည် စျေးအသက်သာဆုံး၊ သန့်ရှင်းပြီး မကုန်မခန်းနိုင်သော နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းအင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အပူပေးခြင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ရေချိုးခြင်း၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ စက်ရုံများနှင့် မိုင်းများ၊ ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ ၎င်းတွင် ရိုးရှင်းသော လည်ပတ်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှု၊ ဆူညံသံမရှိ၊ ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ယူနစ်၏ မြင့်မားသော ထိရောက်မှု၊ တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုတို့ ၏ အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းတွင် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်းစသည့် အားသာချက်များစွာရှိသည်။ တာတမံရေပူ၏ နောက်ဆုံးထွက်ကုန်ဖြစ်သည်။
1. ပုံမှန်ရေတွင်းကဲ့သို့ ဒေါင်လိုက်အသုံးပြုခြင်း၊
2. ဆင်ခြေလျှောလမ်းနှင့် မိုင်းတွင်းကဲ့သို့သော Oblique အသုံးပြုမှု၊
3. ရေကူးကန်ကဲ့သို့ အလျားလိုက် အသုံးပြုခြင်း။
QJ ရေငုပ်လျှပ်စစ်ပန့်သည် ရေတွင်း (deep well pump) အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
1. ရေငုပ်နိုင်သော ပန့်များကို ရေအရင်းအမြစ်၏ 0.01% ထက်နည်းသော သဲများတွင် အသုံးပြုသင့်သည်၊ ကြိုတင်ရေတိုင်ကီ တပ်ဆင်ထားသော ပန့်အခန်းတွင် စွမ်းရည်သည် ကြိုတင်ရေထွက်ချိန်နှင့် ကိုက်ညီသင့်ပါသည်။
2. အသစ် သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ရေတွင်းပန့်သည် ပန့်ခွံနှင့် ပန်ကာရှင်းလင်းရေးကို ချိန်ညှိသင့်သည်၊ လည်ပတ်မှုတွင် ပန်ကာသည် အခွံနှင့် ပွတ်တိုက်မှုမဖြစ်ရပါ။
3. တွင်းနက်ပန့်သည် ရိုးတံထဲသို့ရေမဝင်မီတွင် လည်ပတ်နေပြီး ကြိုတင်လည်ပတ်ရန်အတွက် အခွံကို ထမ်းထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
4. ရေတွင်းပန့်မစတင်မီ၊ စစ်ဆေးရေးပစ္စည်းများသည် အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်-
1) base base bolts များကို တင်းကျပ်ထားသည်။
2) axial ရှင်းလင်းရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်, ချိန်ညှိ bolt အခွံမာသီးများတပ်ဆင်ထားပြီး;
4) မော်တာဝက်ဝံများကို ချောဆီထည့်ထားသည်။
5) မော်တာရဟတ်ကို လှည့်ပြီး လက်ဖြင့်ရပ်တန့်သည့် ယန္တရားသည် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။
5. Deep well pump သည် ရေ၏အခြေအနေတွင် ဘာမှမလုပ်ရပါ။ Pumps ပန်ကာတစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကို ရေအဆင့် 1m အောက်တွင် နှစ်မြှုပ်ထားသင့်သည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသည် ရေတွင်းရှိ ရေအဆင့်ပြောင်းလဲမှုများကို အမြဲစောင့်ကြည့်နေသင့်သည်။
6. လည်ပတ်မှုအတွင်း၊ ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ဝိုက်တွင် ကြီးမားသောတုန်ခါမှုတစ်ခုကိုတွေ့သောအခါ၊ သင်သည် ပန့်ထမ်းခြင်း သို့မဟုတ် မော်တာအဖြည့်ခံအား စစ်ဆေးသင့်သည်။ အလွန်အကျွံ ဝတ်ဆင်ပြီး ယိုစိမ့်လာသောအခါ အပိုင်းအသစ်များကို အစားထိုးသင့်သည်။
7. စုပ်စက်ကို မရပ်မီ ရွှံ့တွင်းနက်ဖြင့် စုပ်ပြီး စုပ်ပြီး ရေဆေးချပါ။
8. ပန့်ကိုမရပ်မီ၊ သင်သည် ရေအဆို့ရှင်ကိုပိတ်ကာ ပါဝါဖြတ်တောက်ကာ ခလုတ်သေတ္တာကို လော့ခ်ချသင့်သည်။ ဆောင်းတွင်းမှာ ပိတ်ထားရင် ရေစုပ်စက်ထဲမှာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။
ငြင်းဆိုချက်- စာရင်းသွင်းထုတ်ကုန်(များ) တွင်ပြသထားသည့် ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို နမူနာအဖြစ်သာ ကမ်းလှမ်းထားပြီး ရောင်းချရန်မဟုတ်ပါ။
ယခင်- တရုတ်နိုင်ငံမှ အကောင်းဆုံး ကျောက်စရစ်ပန့် တင်ပို့ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများ - SYB အမျိုးအစား မြှင့်တင်ထားသော သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဒစ်ပန့် Pump - Boda
နောက်တစ်ခု: Antiabrasive Slurry တန်ဖိုး
Self Priming ရေစုပ်စက်
Water Pump ရော်ဘာတံဆိပ်
Pump ဖြင့် ရေလှောင်ကန်
Abrasive slurry pump အစိတ်အပိုင်းများ Slurry Pump Impeller
Slurry Pump အပိုပစ္စည်း
SFX-Type အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Self-Priming
US ထံမှ နောက်ဆုံးသတင်းများ ရယူပါ။
Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co.,Ltd သည် PRC ရှိ နိုင်ငံတကာ ပန့်စျေးကွက်အတွက် လုပ်ဆောင်နေသည့် ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ပန့်နှင့်ပန့်မောင်းနှင်သည့် စက်ပစ္စည်းများ၊ ပန့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် သတ္တုပုံသွင်းခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အခြား ဟိုက်ဒရောလစ်စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။
Shilipu ရွာမြောက်ဘက်၊ Chang'an ခရိုင်၊ Shijiazhuang၊ တရုတ်နိုင်ငံ။